सरकारको गति | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
May 13, 2018 Dishanirdesh Kanchan0Comments
वर्षौदेखि कुण्डली मारेर रजाई गर्ने सिण्डिकेटधारीहरु धुरु धुरु रोई कराई गरी कायलनामा गरेर सिण्डिकेट समाप्त भएको सहमति गर्न बाध्य भए । सरकार कठोर हुनै पर्छ भन्ने होईन तर अरु सर्वसाधारणलाई सास्ती दिदै मनपरी गर्ने बानी परेकाहरुले ठूलै आन्दोलनको घोषणा गरे यस्तो लाग्दथ्यो यिनीहरुकै कारण वर्तमान सरकार निरिह बनेर केही गर्न सक्ने छैन, केही गरी हालेमा पनि विवस भएर सरकार झुकाउने हाक पार्दै अन्ततः “घुईतडीको शेड्या” को असली रुप देखाएर दण्डहीनतालाई राज्यले आम जनहितका लागी इमान्दारी पुर्वक दायित्व निर्वाह गरे कानूनको पालना गराउन सक्ने नै रहेछ । यो एउटा प्रतिकात्मक पनि हो । सर्वत्र व्याप्त अराजकतालाई तह लगाउन प्रत्येक क्षेत्रमा यसको प्रयोग गर्ने मार्ग पनि प्रशस्त भएको छ । मेनपावर कम्पनी, आयल निगम, छाडा कर्मचारी तन्त्र, बाहुवली देशद्रोहीहरुका असहनीय क्रियाकलाप, घुसखोरी, भ्रष्टाचारका लागि एकपछि अर्को कठोर अभियान आवश्यक मात्र होइन समयको माग पनि हो । यसका लागि कर्मचारी टे«ड युनियन, वित्तिय संस्था, शैक्षिक संस्था लगायतमा प्रत्येक दलका भात्रृ संगठन भएर खुलेआम झोला बोकी हिड्ने सरकारको जुन विकास भएको छ यसलाई समाप्त पार्न विद्यमान ऐन कानून शासन जनताकै लागि हो भन्ने विश्वास जाग्न सक्ने छ तर यसका लागि सत्तारुढ दलसँग आवद्ध रहेका समेत संरक्षित गरिनु हुन्न । पक्ष विपक्ष सबैका लागि समान रुपमा लागु
गरे मात्र यसको निकास आउने छ । हामी आम सर्वसाधारणले देखे भोगेका लूट भ्रष्टाचारका दृश्य पत्ता लगाउन कुनै असहजता पनि देखिदैन । महालेखाको प्रतिवेदन लागु गर्न सकिए मात्र पनि नेपाल र नेपालीको कल्याण हुन सक्ने छ । हालै सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचार अनुसार सेनाले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै हेलीकोप्टर खरिदका लागि पाईलट सहितको टोली फ्रान्स पठाउदै छ । सरकार त्यसमा दृढ भएर कार्वाही र दण्ड गर्न सक्ने सामर्थ राख्दछ ? जसरी डाफोर सुनकाण्ड लगायतमा धमाधम कार्वाही थालिएर परिणाम आई रहेका छन, कर्मचारी तन्त्रमा कामै नगर्ने रु कमाउने अभिष्ट राखेका गतिविधिमा अंकुश लगाउनका लागि पनि सरकार केही गर्ने नै हो भन्ने आशा जगाएको छ । हजारौं व्यक्तिहरु नक्कली सर्टिफिकेटका आधारमा सुरक्षा शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरुमा राज्यलाई ठग्दै अन्ततः आम सर्वसाधारण विरुद्ध विश्वासघात गर्दै रहेका समाचार सामान्य हुन सक्दैन । देशलाई खोक्रो पार्ने यस्ता भ्रष्टाचारीहरु दण्डित हुनै पर्दछ । यस्ता कानून समस्त कार्वाही प्रत्येक क्षेत्रहरुमा लागु हुनु पर्दछ । कानून मन्त्रीले कतिपय निर्णय छानवीन गर्ने अठोट व्यक्त गर्नु भएको छ यो अत्यन्तै सकारात्मक भरोसा जगाउने प्रकृतिको छ । कुनै विषय अदालत प्रवेश नगर्दै पदासीन प्रधान न्यायाधीशले आदेश गरे त्यो दुराशयपुर्ण थियो भनि नवराज सिलवाल
प्रकरणबाट स्पष्ट प्रमाणित भएको छ भने उनकै पालामा भएका नियुक्ति सम्बन्धि अझै टुंगो लाग्नु नपर्ने कारण के हो ? राजनैतिक भागवण्डा नैतिक पतन देखिने फौजदारी
अपराध भित्र पर्ने नपर्ने के हो ? योग्यता क्षमता नभएका भ्रष्ट व्यक्तिहरु न्यायको सर्वोच्व आसनबाट फाटवालाको एउटै पत्रबाट बेखबर भएर निस्कनु पर्यो धर्मका नाममा आफैलाई गोली हान्न लगाउने, नेपालमा समानान्तर सत्ता खडा गरेर दोहरा राज्य भनेर प्रभु राज्यका नाममा देश भित्र ताण्डव मच्चाई रहने कुटील षडयन्त्रकारीहरु लखेट्ने काम गर्न यो सरकार सक्षम छ कि छैन हामी आम जनता प्रतिक्षामा छौं ।
उपचारका नाममा निजी क्लिनिक
पुर्याई सर्वस्व गराउने, अनेक विचौलियाहरुका सेटिंग भंग हुन्छन कि हुदैनन् लाखौ नरनारी वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएर दाश दासी भएर कतिपयले प्राण विसर्जन गरेका छन् । त्यस्तो गर्ने गराउने दण्डित भएको हेर्न जनता आतुर छौं ।
असल नियतले कानूनी कारवाही भएमा जनसमर्थन प्राप्त हुदो रैछ भनि यातायात सिण्डिकेट विरुद्धको सफल कार्वाहीबाट प्रमाणित भएको छ । न्यायालय सेना,
कर्मचारी नेता जो कोही पनि उम्कन हुन्न भन्ने भरोसा जगाउन सके मात्र पनि लोकप्रिय सरकार संभव हुने रहेछ । नेता टिकट राजदूत नियुक्ति लगायत प्रत्येक क्षेत्रमा घुस भागण्डा निर्विवाद प्रमाणित भएको छ । केही गर्न प्रयत्नशील महावलशाली केपी ओलीका मार्गमा भने अनेक व्यवधान देखा परि रहेका छन् । विभिन्न दल एकिकरणमा भगभण्डा बाधक बनी रहेको देखिन्छ । प्रत्येकका आफ्ना स्वार्थ छन् ऐश्वर्यमय जीवनको अभिालाशा छ आम सर्वसाधारण परको कुरा आफ्नै कार्यकर्ता समेत वेवास्ता गर्ने प्रवृति देखा
परी रहन्छन् ।
रामचन्द्र पौडेल जस्तै मपाई नेताहरु कै कारण कांग्रेस धराशायी बन्दै छ । यसको अर्थ शेर बहादुर असल भन्ने होइन, कोटरीको घेरा भित्र रहेर आफ्नो अतीतको जीवनको यथेष्ट ब्याज खाई सकेर पनि तृप्ती भएको देखिदैन । निष्पक्ष, तटस्थ जनताका नजरले कांग्रेस भित्रको असन्तुष्टी सर्वथा जायज भएर पनि उनीहरुका आफै स्वार्थ गासीएका छन्, मोदी भ्रमणमा २ नं. प्रदेशले विचित्र
प्रकारको स्वागतको तयारीले नयाँ संकेत गरी रहेको छ । तटस्थ नीति भन्दा भन्दै कोही बाम कोही दक्षीण भएर चीन भारतको चेपुवामा पर्दा सक्षम राजनीतिज्ञ देखा पर्छन कि पर्दैनन् त्यो पनि समयले निर्धारित गर्ने छ । वर्तमान सरकारलाई प्रतिपक्षबाट कुनै खतरा देखिदैन, लघुताभाष रहेको कांग्रेस दलबाट चूनौती संभव लाग्दैन । जवरजस्त चुनौती सत्तापक्ष पदहरु भिन्नै रहेको हुनाले आउदो दिनहरुमा सरकारले गति लिन सक्लान ? यसैमा नेपाली राजनीतिको भविष्य छिपेको छ ।
← विद्यार्थी भर्नाको मौसम
हामी आफ्नो पहिचान मेटाई रहेका छौं →